YEYIPHI IFILIMU EPHUMELELE II-OSCARS EZININZI? KWAYE NGUBANI OPHUMELELE KAKHULU-IRADIO TIMES - IIMUVI
Yeyiphi ifilimu ephumelele ii-Oscars ezininzi? Uluhlu lwabaphumeleleyo kwiAkhademi
Kudala ukuza, kodwa abalandeli befilimu banokukhangela phambili ukonwabela ukulibaziseka kwalo nyaka Amabhaso ama-Academy , eziqhubeka ngale Cawa (ngomhla wama-25 ku-Epreli).
Umsitho wonyaka ophelileyo wabona eyona nto iphambili, nge Isidudu ukuba ngumboniso bhanyabhanya wolwimi lwangaphandle owakha waphumelela ibhaso eliphezulu, kwaye kukho ukubanakho ukuphumelela okumbalwa okwandayo kweli xesha.
UChloe Zhao ungaphakathi ngesikhalo esihle sokuba ngumfazi wokuqala wombala ukuphumelela uMlawuli oGqwesileyo gong kwifilimu yakhe eyaziwayo Nomadland Ngelixa uRiz Ahmed enethuba langaphandle lokuba ngumlingisi wokuqala wamaSilamsi ukuba agoduke neActor yeOlasta.
Ii-Oscars phantse zineminyaka eli-100 ubudala, ziqale ukubanjwa ngo-1929, kwaye ukusukela ngoko kuye kwakho imfumba yonke yoloyiso kubhiyozelwa eyona mveliso intle kwezentengiso kwezona zinto zibalaseleyo kwezikrinini nangasemva kwethalente.
Kodwa ngubani onebango elidumileyo lokuba lelona Mbasa ziBalaseleyo? Ngabaphi abadlali, abalawuli kunye nababhali-skrini abaqokelele elona nani likhulu lemifanekiso eqingqiweyo ye-Oscars- kwaye yeyiphi ifilimu ephethe irekhodi lelona bhaso ligama lalo?
Yeyiphi ifilimu ephumelele ii-Oscars ezininzi ngalo lonke ixesha?
Umlingisi uKatherinerine Hepburn ubambe irekhodi lee-Oscars ezininzi zokubambela, ephumelele amabhaso amane eAkhademi kulo lonke ikhondo lakhe lomsebenzi kunye nokufumana amagama abali-12.
U-Hepburn uphumelele ii-Oscars kwelona nqanaba libalaseleyo lomdlali weqonga kwimidlalo yakhe bhanyabhanya Morning Glory (1933), Guess Who's Coming to Dinner (1967), The Lion in Winter (1968) nakwiOn Golden Pond (1981).
Ngubani ovotela ii-Oscars?
Abadlali uJack Nicholson, uDaniel Day-Lewis kunye noWalter Brennan, okwangoku, ngamadoda amathathu anee-Oscars ezininzi zokudlala, baphumelela kathathu. Ngelixa amanye amabhaso ka-Brennan kunye no-Nicholson ayengowona mlingisi uxhasayo obalaseleyo, zontathu iimpumelelo zika-Day-Lewis zazingoyena mdlali uphambili, kwaye uphethe irekhodi elo nqanaba.
Oyena mntu uphakanyiswe kakhulu ukuba abe ngumdlali weqonga ngu-Meryl Streep, ofumene i-21 nods ngexesha lomsebenzi wakhe. Uphumelele kathathu uKramer vs.Kramer (1979), uSophie's Choice (1982) kunye ne-Iron Lady (2011).
Ngubani ophumelele ii-Oscars ezininzi zokukhokela?
UJohn Ford akazange aphumelele namnye kwii-Oscars zakhe ezine kwiNtshona yakhe edumileyo. Endaweni yokuba uphethe irekhodi loMlawuli oGqwesileyo we-Informer (1935), iidiliya zomsindo (1940), indlela eyayiyiGreen My Valley (1941) kunye nendoda ethe cwaka (1952).
Nangona uFord ephumelele ii-Oscars ezininzi kuwo nawuphi na umlawuli, uWilliam Wyler ubambe irekhodi labona batyunjiweyo kolu qeqesho olwamkela i-12, ezintathu kuzo zaphumelela isilivere. I-Ford yonyulwe isihlanu, ngokuqhayisa ngenqanaba lokuguqula.
Ngubani ophumelele ii-Oscars ezininzi zokubhala isikrini?
Abantu abahlanu banikwe ii-Oscars ezintathu zokubhala: uBilly Wilder, uCharles Brackett, uFrancis Ford Coppola, uWoody Allen, noPaddy Chayefsky.
Iimuvi eziphumelela u-Oscar kwiNetflix
Kodwa ngu-Allen ophumelele awona mabhaso ama-Akhademi kudidi lweBest Original yoBoniso lwefilimu, kwiifilimu zakhe uAnnie Hall (1977), uHana nooSista Bakhe (1986), kunye naphakathi kobusuku eParis (ngo-2011).
Ngowuphi umntu wase-Bhritane ophumelele ii-Oscars ezininzi?
Umqambi wefilimu uJohn Barry uphumelele ii-Oscars ezininzi kunaye nawuphi na omnye uBrit. Uqokelele amaBhaso ama-Akhademi amahlanu ewonke, amabini azalelwe i-Free (ngo-1966), kwaye enye inye yeNgonyama ebusika (ngo-1968), i-Out of Africa (ngo-1985) kunye neMidaniso neengcuka (ngo-1990).
Ngowuphi umdlali weBritane ophumelele ii-Oscars ezininzi?
Iya kuba nguDaniel Day Lewis kunye neempumelelo zakhe ezintathu kwiNyawo lam lasekhohlo, kuyakubakho iGazi kunye noLincoln.
Amabhaso ama-2021 Academy aya kubanjwa ngeCawa umhla wama-25 ku-Epreli kwaye aza kusasazwa kwiSky Cinema e-UK. Ungayifumana nge-NOW Sky Cinema Pass.
Ufuna into oza kuyibukela ngokuhlwanje? Jonga isikhokelo sethu seTV.
ziqala nini izizwe ezi-6
indawo ezolileyo netflix uk
uvuliwe nini umgca womsebenzi
apho ubuyele ebomini ufotwe
yintoni ekwidisney plus
indlela yokusombulula i-sudoku enzima